Lavin’ireo Mpikatroka Mafàna Fo Ilay Fanambarana Momba ny Zon’Olombelona Any Azia Atsimo Atsinanana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Desambra 2012 8:29 GMT
Fikambanana mpiaro zon'olombelona maherin'ny 50 avy any Azia Atsimo Atsinanana no namoaka fanambaràna iray manakiana ny fanabaribariana ilay Fanambaràna momba ny Zon'Olombelona novolavolain'ireo firenena folo ao anatin'ny Fikambanan'ireo Firenena Any Azia Atsimo Atsinanana.
Ny fanaovan-tsonia niarahan'ny rehetra dia vita nandritra ny Vovonana faha-21-ny ASEAN tao Phnom Penh tamin'ny volana lasa. Ny eritreritra hanao fanambarana iombonana momba ny zon'olombelona dia noresahana tao Laos tamin'ny 2010 saingy nitaraina ho tsy mba nakàna hevitra ireo mpiray antoka fototra sy ireo hafa mpiaro zon'olombelona.
Nony navoaka ho fanta-bahoaka ilay fanambaràna tamin'ity volana ity, dia nolavin'ireo fikambanana mpiaro zon'olombelona any amin'ny faritra avy hatrany noho izy nambara ho miaty andàlana mandiso ny zo iraisana erantany amin'ny resaka fiarovana zon'olombelona. Nanontanian-dry zareo manokana ny fomba nifidianana ny teny amin'ireo hevitra fototra ankapobeny amin'ilay fanambaràna, izay mampifandanja ny zo sy adidy ary ny andraikitra teren'ny lalàna horaisin'ireo firenena mpikambana
Ireo anjatony nanatevina laharana ny hetsi-panoherana iray nisy tao Phnom Penh mba hametrahana ny zon'olombelona ho anaty fandaharam-potoana nandritra ny Vovonana faha-21-n'ny ASEAN. Sary nalain'i Erika Pineros, Fizakà-manana @Demotix (11/16/2012)
Ilay andàlana mahabe resaka dia mivaky toy izao :
…tsy maintsy ao anatin'ny zava-misy isam-paritra sy isam-pirenena no anatanterahana ny zon'olombelona, atao an-tsaina ny fototra ara-politika, toekarena, sosialy, kolontsaina, tantara sy ara-pinoana samihafa.
Ny fampiharana ny zon'olombelona sy ny fahalalahana fototra dia tokony hiaran'ireo fameperana nofaritan'ny lalàna fotsiny ihany mba ho fiarovana ny zon'olombelona sy ny fahalalahana fototra ananan'ny hafa, ary hamaliana fotsiny ireo zava-takian'ny fiarovam-pirenena, ny filaminam-bahoaka, ny fandriampahaleman'ny olona, ny fahasalamana, ny maoraly, hatramin'ny fahasambarana ankapoben'ny vahoaka ao anaty fiarahamonina demaokratika iray.
Izay mihitsy, marobe ireo zo fototra no hita ao anatin'ilay fanambaràna tahaka ny zo ho afaka mifidy, handray anjara anaty governemanta, hanatevina laharana na hanangana sendika, saingy ireny zo heverina ho iraisana ireny dia ampiharina fotsiny raha mifanaraka amin'ny lalàna sy ny politikam-pirenena efa misy, raha ny fahitàna azy.
Prachatai dia namoaka ny fanambaràna avy amin'ny vodnron'ny fiarahamonina sivily izay manakiana ilay fanambarana iombonana:
Ilay antontan-taratasy dia fanambaràna nataon'ny fitondram-panjakana mody sarontsaronana ho toy ny fanambaràna momba ny zon'olombelona.
Mampalahelo hoe ireo governemanta ao amin'ny ASEAN no nisisika hanao Fanambaràna izay mahatonga ny vahoakany ho tsy mba mendrika hisitraka zon'olombelona raha miohatra amin'ireo vahoakan'i Eoropa, Afrika na ireo any Amerika. Tsy tokony hanaiky velively fiarovana ambanimbany kokoa ny zon'izy ireo ny vahoakan'ny ASEAN mitaha amin'ireo ambiny hafa eran'izao tontolo izao.
Tsy tafiditra ao anatin'ilay Fanambaràna ireo tena fanalahidin'ny zo sy ny fahalalahana fototra, isan'ireny ny zo hanangana fikambanana an-kalalahana ary ny zo tsy hiharan'ny fanjavonana an-terisetra.
Faran'izay tena mampalahelo indrindra ny hoe ireo governemanta ao anatin'ny ASEAN izay demaokratika kokoa ary misokatra amin'ny resaka zon'olombelona no nilefitra tamin'ny teriterin'ireo governemanta tsy mankasitraka ny resaka zon'olombelona tamin'ny fankatoavana fitaovana faran'izay mifono teti-drasty toy izao.
Tsy mendrika ny anarana entiny akory ity Fanambaràna ity. Noho izany dia lavinay. Tsy hampiasa an'io amin'ny asanay izahay amin'ny maha-vondrona nanokan-tena ho mpiaro zon'olombelona anay aty amin'ny faritra. Tsy hitanisa an'io akory izahay rehefa mirasaka ASEAN, na firenena mpikambana ao amin'ny ASEAN, raha tsy ohatra ka hoe hanameloka azy io ho toy ny fitaovana fanimbazimbana ny zon'olombelona.
Aaraka ny nambaran'ny Maruah, vondrona iray mpiaro zon'olombelona ao Singapore, manao z'inona ny foto-kevitry ny zon'olombelona ilay fanambaràna :
Tsy azo ekena sy tsy mitera-bokatsoa io…Io andalana ao anatin'ilay [fanambaràna] dia manakana sy manao z'inona ny foto-kevitry ny zon'olombelona io. Manahy mafy izahay amin'ity ‘fitsabahan'ny resaka ‘maoralim-panjakana’ ity satria mikendry manokana zavatra iray ary azo adika tsotra hoe hahavoa ny olona, indrindra fa ny vehivavy tsy ho afaka hizaka feno ny zony. Io andàlana io dia tsy azo ekena, satria ny fanavakavahana amin'ny fandikàna ny reskaa ara-moraly dia hampitombo be ny fahosàn'ny vondrom-piarahamonina sasantsasany…raha tokony hijery ny fitambaram-be, nanao anjorom-bala ireo vondrom-piarahamonina sasantsasany io tamin'ny alàlan'ny fanilikilihana.
Karapatan, tambajotra iray mpiaro zon'olombelona any Philippines, dia manahy fa hoe ilay fanambaràna dia mety ho ampiasaina ho toy ny ‘lasitra fakàn-tàhaka ho fanitsakitsahana bebe kokoa ny zo’ :
Tsy fialàna bàla fotsiny amin'ilay fanambaràna izay mety harafitra hifanaraka fotsiny amin'ny tombontsoan'ireo Firenena mpikambana, saingy atahoranay ho ampiasaina ireny andalana ireny hanamarinana ny fitohizan'ny fanitsakitsahana zon'olombelona ataon'ireo firenena ao amin'ny faritra. Tsy hoe raisina fotsiny ho toy ny poak'aty ilay fanambaràna amin'ny resaka fampiroboroboana, fiarovana ary fanatanterahana ny zon'olombelona, mety ho azo ampiasaina ihany koa izy ho toy ny lasitra fakàn-tàhaka amin'ny fanitsakitsahana bebe kokoa ny zon'olombelona.
Ny Kaomity ho Fiarovana ny Mpanao Gazety dia manamarika fa ‘tsy ampy rafitra fampiharana mifandraika aminy’ ilay antontan-taratasy.